डण्डीफोरले हैरान हुनुहन्छ ? पुदिनाले पुग्छ फाइदा कसरी प्रयोग गर्ने हेर्नुहोस् – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Intresting/डण्डीफोरले हैरान हुनुहन्छ ? पुदिनाले पुग्छ फाइदा कसरी प्रयोग गर्ने हेर्नुहोस्
साना नानीलाई झाडापखाला लागेको छ भने दूधमा पुदिनाको पात उमालेर २ चम्चाका दरले दैनिक २/३ पटक ख्वाएमा झाडापखाला निको हुन्छ ।
पुदिनाको पात पिसेर अचार खाएमा यसले पेटको समस्या निको पार्छ ।
मुर्छित व्यक्तिलाई पुदीना पिसेर सुघाएमा मुर्छित अवस्थाबाट ब्युत्याउछ ।
प्रसव’को समयमा हुने पीडा कम गर्न पुदि’नाको रस पिएमा प्रसव पीडा कम गर्छ ।
जब बिहे भएकै रात बेहुलीको सत्य थाहा पाउदा बेहुलाको उड्यो होस् !
प्रेमिकाकी आमालाई मिर्गौला दिएको केही दिनमा नै प्रेमीकाले छाडेपछि प्रेमीको बेहाल
मात्र एक घरेलु उपाय, जसले हटाउछ तपाईको अनुहारको अनावश्यक रौं